Air Asia na-ere ụgbọ elu 29 naanị iji gbazite ha azụ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air Asia na-ere ụgbọ elu 29 naanị iji gbazite ha azụ
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa Malaysia • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Air Asia na-ere ụgbọ elu 29 - Airbus 'A320-200ceo na A320neo na Castlelake. Castlelake ga-agbazite otu ụgbọ elu ahụ laghachi na ọdụ ụgbọ elu Malaysia na-emefu ego AirAsia.
Maka AirAsia, nkwekọrịta ahụ na-egosi mbugharị ọzọ iji monetize akụ ya dị ka ụgbọ elu kachasị ego nke Asia na-achọ ịgbanwe onwe ya dị ka ihe na-enwu enwu, na-elebara anya na ntanetị.
Na mkpesa ya na Bursa Malaysia ụnyaahụ, AirAsia kwuru na ndị enyemaka ya niile, Asia Aviation Capital Limited (AACL), abanyela nkwekọrịta ịzụta òkè na ụlọ ọrụ ndị na-adịghị mma nke Castlelake maka mkpofu oke ego ya niile na Merah Aviation Asset Holding Ltd - nke nwere ugbo elu.
O kwuru na ego sitere na mkpofu ahụ ga-abụkarị maka ịkwụghachi ụgwọ a na-akwụ na ịkwụ ụgwọ mmefu e mere atụmatụ maka azụmaahịa a chọrọ.
“Boardlọ ọrụ ahụ kwenyere na azụmahịa ahụ a chọrọ bụ nke kwekọrọ na atụmatụ otu AirAsia iji lekwasị anya na isi ọrụ ụgbọ elu ya, ma na-ekenye akụ na otu ndị AirAsia n'ụzọ dị mma.”
“Site na azụmahịa a chọrọ, AirAsia ga - enwe ike ichekwa ego ya dị ugbu a maka azụmaahịa ọ ga - eme n’ọdịnihu ma nyekwa ikpo okwu kwụsiri ike maka AirAsia iji gbasaa netwọkụ ụzọ ya, na - ejikọtaghị nkwa iji nweta ụgbọelu nke bụ isi obodo na ọdịdị na / ma ọ bụ ịmalite ọhụụ na ohere itinye ego kwesịrị ekwesị iji bulie nloghachi ndị nwe obodo. ”